TIANQU ALL XS809W မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်စျေးနှုန်း ...
အစရေဒီယို-controlled device များRC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်Tianqi အားလုံး XS809W မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
Tianqi အားလုံး XS809W မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကစားစရာအရုပ်, ပဟေဠိများနှင့်ပဟေဠိ
လိုချင်သောစာရင်းသို့ထည့်သွင်းပါလိုချင်သောစာရင်းမှ Addedလိုချင်သောစာရင်းထဲကနေဖယ်ရှား 1
အားလုံးပြရန် + စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုသမိုင်း
စျေးနှုန်းစုစုပေါင်း XS809HW 720P WIFI FPV RC Quadcopter RTF Black
€ 46,13 - 2020 11 မေလ
€ 46,21 - 2020 27 Aprilပြီလ
€ 46,00 - 2020 20 Aprilပြီလ
€ 45,70 - 2020 13 Aprilပြီလ
€ 46,31 - 20207Aprilပြီလ
€ 44,98 - 2020 31 မတ်လ
€ 46,80 - 2020 23 မတ်လ
€ 44,78 - 2020 16 မတ်လ
မှ: 2019 ဇွန်လ 12
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 49,99 - 2019 13 ဇွန်လ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 43,96 - 20209မတ်လ
38.99MP Headless Mode ကို foldable လက် RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့်အတူ XS35W WIFI FPV HD ကိုကင်မရာ၏အမေရိကန် $ 809 2% ...
အားလုံး XS809HW 720P WIFI FPV RC Quadcopter RTF က Black
Tianqi XS809W RC Quadcopter 2MP Wi-Fi ကင်မရာ
Virhuck အားလုံး XS809W 720 အဆင့်မြန်နှုန်း Mode ကို, G-sensor ကိုအတူ 3P Wi-Fi FPV Quadcopter RC foldable ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း ...
အပို 809mAh ဘက်ထရီက Black နှင့်အတူအားလုံး XS900HW RC Quadcopter RTF
Tianqi အားလုံး XS809W foldable Quadcopter RC - RTF
RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားလုံး XS809W HD ကိုကင်မရာ 4MP 6P RC Quadcopter တစ်ခုမှာ Key ကိုရန်နှင့်အတူ RTF 2.4CH 0.3 ဝင်ရိုးတန်း 480G ...
RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားလုံး XS809HW HD ကိုကင်မရာ 4MP 6P RC Quadcopter တစ်ခုမှာ Key ကိုရန်နှင့်အတူ RTF 2.4ch 2.0 ဝင်ရိုးတန်း 720G ...
အားလုံး XS809W ဝိုင်ဖိုင် FPV 0.3MP ကင်မရာ foldable 2.4G6ကိုယ်ပိုင်ဝင်ရိုးတန်း Gyro RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Quadcopter, G-အာရုံခံ RTF
RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားလုံး XS809Mini HD ကိုကင်မရာ 4MP 6P RC Quadcopter တစ်ခုမှာ Key ကိုရန်နှင့်အတူ RTF 2.4CH 2.0 ဝင်ရိုးတန်း 720G ...
အားလုံး XS809W ခေါက် 720p FPV HD ကိုကင်မရာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပျံသန်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အားလုံး XS809W Testflug TomTop | HD + | Deutsch
Esse eu အာမခံ !!! မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားလုံး XS809HW - Tianqi xs809w WIFI FPV
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Tianqi အားလုံး XS809W မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
ကင်မရာ, ရေဒီယိုထိန်းချုပ်ရေး, ထိန်းချုပ်ရေး APP ကို ​​Wi-Fi, Wi-Fi FPV, ဗားရှင်း brushed
3D စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့ Air ကိုစာနယ်ဇင်းမြင့် Hold, နောက်သို့ရှေ့သို့ / ဆွဲငင်အား Sense သည်ထိန်းချုပ်ရေး Headless Mode ကိုတစျခုမှာ Key ကိုအလိုအလျောက်ပြန်သွား, Sideward လေယာဉ်, အမြန် Up ကိုနှေးကွေး, up / down, လက်ျာဘက်လက်ဝဲ / Turn, Wi-Fi Connection ကို
6 ဝင်ရိုးတန်း Gyro
အဟောင်းကို 14 နှစ်ပေါင်းအထက်
2.4GHz ကြိုးမဲ့ Remote Control ကို
ရေဒီယို Mode ကို
Mode ကို2(လက်ဝဲလက်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ)
package အရွယ်အစား (L ကိုက x W x ကို H ကို)
X ကိုက x 43.50 29.00 8.00 စင်တီမီတာ x ကို 17.13 11.42 3.15 လက်မ x ကို
နောက်ထပ် Gimbal နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့
၁ - ၅.၂ မီတာ
3 x ကို 1.5V AA ကိုဘက်ထရီ (မပါ)
ကင်မရာ Pixels (အမတ်)
package အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)
1, transmitter 1, 1 x ကိုကို USB Cable ကို x4ပိုလေယာဥ်ပန်ကာ, လေယာဥ်ပန်ကာကာကွယ်ပေးသူ4က x x, ဝက်အူလှည့ 1, 1 အင်္ဂလိပ်လက်စွဲစာအုပ် x x (ဘက်ထရီပါဝငျ) Quadcopter x
Tianqi အားလုံး XS809W မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ 10 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Tianqi အားလုံး XS809W မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
မာတင် - 2019 10 ဇွန်
ဒါနဲ့အနည်းငယ်သေးငယ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့်အတူကစားခြင်းနှင့်ဤတစျခုပျေါမှာငါ့မျက်စိတယ်ပါပြီ။ တဦးတည်းဘက်ထရီနှင့် 2MP ကင်မရာကိုအတူတဦးတည်းအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ငါမိသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအွန်လိုင်းပထမဦးဆုံးအရာမှာရှာနေကင်မရာမှန်ဘီလူးငါမြင်အခြားသူမြားကိုထက်သေးငယ်ခဲ့တာပါပဲ။ ငါကသူတို့ကငါ့ကိုမမှားမော်ဒယ်ကိုရောင်းပေမယ့်မယ့်ဒါကဆိုလိုနိုင်စဉ်းစားခဲ့။ သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်သူတို့ကိုစံချိန်လာပေမယ့်သင်တစ်ဦး SD ကဒ်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတစ်ဦး $ 40 မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဘို့တော်တော်လေးလျောက်ပတ်လျှင်အဆိုပါဗီဒီယိုများတကယ်မကောင်းတဲ့လုပ်ပါ။ အဆိုပါကဒ် fat32 ကို format နဲ့ငါမပြဿနာများဗီဒီယိုများမှတ်တမ်းတင်နှင့်ငါ့ကို PC မှသူတို့ကိုလွှဲပြောင်းခဲ့ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းသောထုပ်ပိုးနှင့်အကြောင်းအရာများကိုအမှန်တကယ်သည်ကြီးခဲ့ - ဝက်အူလှည့, အားလပ်ချိန်မှာဓါးသွားနှင့်ကိုယ်ရံတော်။ အရာတစ်ခုမှာသူကအနည်းငယ်ပိုအစွမ်းထက်ငါမျှော်မှန်းထားသည်ထက်ဖြစ်ပြီးတောင်မှငါမျက်စိကန်း၌အပေါက်ကိုအတူတက်အဆုံးသတ်ဓါးအစောင့်နှင့်ဝသကဲ့သို့သငျသညျသေးငယ်တဲ့နေရာရှိသည်ဆိုပါကသင်ကအိမ်တွင်းကလည်ပတ်ဘဲနေရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ကဆင်းသက်လာသောအခါစိတ်ထဲရှိကရိုးရှင်းစွာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်နှင့်ကပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သမျှချိုးမည်မြင့်မားအမြင့်ထံမှမပါလျှင် Hacking ကို။ ဘက်ထရီသက်တမ်းစျေးနှုန်းအကွာအဝေးအဘို့သည်ကြီးနှင့်သင်ကျိန်းသေယခုတိုင်အောင်တစ်ဦးထက်ပို🙂အဘယ်သူအားမျှမရလို
Andrea Marinelli - 2019 10 ဇွန်
ဟို scelto မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပုံမှန်အတိုင်း questo YouTube ဖြင့်ဟို visto ကွဲပြားခြားနားအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်။ အလိုလိုသိ Devo ammettere che sono rimasto stupit Dallas manovrabilitàအီး dalle စွမ်းဆောင်ရည် roller di semplice ed ။ chi vuole ခ PRATICA con il မန်းဒ dei မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှုန်းသည် L'အကောင်းဆုံးကတော့။ la အီရတ်တွင် una batteria Decin di minuti di volo အီး la qualità della fotocamere discretamente E alla buona အတွက် rapportara Fascia di prezzo ။ E yl Giusto compromesso tra အရည်အသွေးအီး prezzo.Lo Consiglio ea s ကို chi cerca un ကိုယ်ပိုင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ် principianti ။
ဆာဂျီယို - 2019 10 ဇွန်
Tianqiu XS809 HWG E un piccolo မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် dalle caratteristiche AVANZATE che vola molto ဂိ, si può PILOTAR con il radiocomando dotazione နှင့် USand il စမတ်ဖုန်း con una applicazione gratuita scaricabile da PlayStore, La VERSION XS809HWG AGGIORNATA ဟက်တာ la fotocamere 2MP အီးမှတ်ပုံတင်ရေးကိုဗီဒီယို alla RISOLUZIONE di proprio 1280 တစ် 720 stesso RISOLUZIONE နှုန်း le fotografie 1280 တစ် 720 ကောက်ပဲသီးနှံ da 4: la နှုန်း SD card ကနေတစ်ဆင့် 3, il quadricottero ဟက်တာ UNO slot ကအကောင့် Create့filmati အီး le ဓာတ်ပုံ possono essere မှတ်ပုံတင်ရေး SIA (inserita မှာ) SD ကတ်ပေါ်တွင်အခြေခံ che sul တယ်လီဖုန်း (filmati linea orizzontale နှုန်းကeun ဘာရိုမီတာ Control che l'Altezza, အီး decollo atterraggio Automatic, ottimo မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များတွင်edi dotate giroscopio mantener တစ်ကိုယ်တော် collegando lo စမတ်ဖုန်း attivare အီး si possono ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ) .mu.l မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်။ nulla
laborant520 - 2019 10 ဇွန်
Характеристикиперечислятьнебуду, таккактакиекаквописании။ Вобщемпокупкойоченьдоволен။ всёрабочееинетникакихповреждений။ Оченьрезвыйимощныйаппаратдляэтойценовойкатегории။ Камерахотьи 2MP, нокачествокартинкинаэкранетелефонемнеоченьнравиться။ Кнопкивозвратдомойифункциязависанияоченьотличная။ Естьвкомплектезапасныелопастичтооченьважнодляновичковиэкстримальныхлётчиков။ Неткнопокнапультезаписивидеоифото။ Активируетьсятолькостелефона။ Неукомплектованзапаснымиаккамуляторами (АКБ) насамквадрокоптер။
အလက်ဇန်းဒါး - 2019 10 ဇွန်
Цена, качество။ Вкомплекте။ самкоптер, пульт, сменныелопасти4шт, Ответочка, 1 инструкцияиаккумулятор။ Можетуправлятьсячерезпультрадиоканалуиличерез Wi-Fi спомощьюсмартфона, программа XSW ပန်းကန်ပြားပျံမူ။ Естьвозможностьзаписиполетана flash ကို, MicroSD картанакопитель။ Аккумуляторлегкоснимается, заряжаетсячерезобычноезарядноес microUSB разьемом။ Желательноиметьпарочкуаккумуляторовнаподмену, т.к. времяполетанаодномоколо 10 мин။ Непонятнокакработаеткнопка "မူလစာမျက်နှာမှပြန်သွား" ။
8km အလုပ်လုပ်အကွာအဝေးမှ Xiaomi က fimi X4 အရှေ့တောင် foldable 5k FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ,
Mavic Pro ကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်đi 4k
Cheerson CX - 20 GPS စနစ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
đi Mavic2မှန်ဘီလူးပျောက်ကွယ်သွား
đi Mavic Pro ကိုပလက်တီနမ် Combo မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် + ဆက်စပ်ပစ္စည်း
1 167,52 €
F36 Mini ကိုပျောက်သွားမှာ
တဦးတည်း Ninebot Z10 လျှပ်စစ် Single-လှုံ့ဆျော (45km / ဇ, 90km ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
€1 501,95 €1 426,85
Samsung ရဲ့ Galaxy စမတ်ဖုန်း A60
3km အလုပ်လုပ်အကွာအဝေးမှ Xiaomi က fimi A1080 1P FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ,
အိမ်တွင်းအလိုအလျောက်မြုပ်နှံနိုင်သော APP Smart Planned Roborock S50 Xiaomi MI စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက် ၂ ...